ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး ရုံးချိန်းတွင် မြန်မာသတင်းသမားများ ကာကွယ်ရေးကော်မတီမှ အင်္ကျီအနက်? - Yangon Media Group
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး ရုံးချိန်းတွင် မြန်မာသတင်းသမားများ ကာကွယ်ရေးကော်မတီမှ အင်္ကျီအနက်?
ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ရိုက်တာသတင်း ထောက်နှစ်ဦးအား ဇန်နဝါရီ ၁ဝရက်တွင် အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံး၌ ထပ်မံရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့သည်။ ရုံးချိန်းတွင် မိသားစုများနှင့် တွေ့ခွင့်ရရှိ ခဲ့ပြီး မြန်မာသတင်းသမားများကာကွယ်ရေး ကော်မတီD(PCMJ)မှ ဦးဆောင်ကာ မတရား ဖမ်းဆီးထားရမှုအတွက် အနက်ရောင်အင်္ကျီများ ဝတ်ဆင်ကာ ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော် ခြင်း၊ ငှက်လွှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဦးသက်ဦးမောင်(ခေါ်)ဝလုံးနှင့် မိုးအောင် (ခေါ်)ဦးကျော်စိုးဦးတို့ကို ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း မောင်တောဒေသတွင်း အကြမ်းဖက်မှု များနှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာစာရွက် စာတမ်းများ လက်ဝယ်တွေ့ရှိသည်ဟုဆိုကာ ပြီးခဲ့သည့် ၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၂ ရက် ညတွင် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် ထောက်ကြန့်ရဲစခန်း မှ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ၁၄ နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည့် ဗြိတိသျှကိုလိုနီ ခေတ်က ၁၉၂၃ ခုနှစ် အစိုးရလျှို့ဝှက်ချက် အက်ဥပဒေနှင့် တရားစွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ လျှို့ဝှက်အက်ဥပဒေ နှင့် မတရားဖမ်းဆီးခံထားရသည့် သတင်း ထောက်နှစ်ဦးအား ၂ဝ၁၇ ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ် တရားရုံး၌ ရုံးထုတ်ခဲ့ပြီး သတင်းသမားအလုပ်သာ လုပ်ခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့် အပြစ်မရှိ ကြောင်း ရိုက်တာသတင်းထောက်နှစ်ဦးက ဆိုခဲ့သည်။
တတိယအကြိမ်မြောက်ရုံးချိန်းအား ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် မြောက်ပိုင်း ခရိုင်တရားရုံးတွင် ထပ်မံချိန်းဆိုထားကြောင်းသိရသည်။ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ရိုက်တာသတင်း ထောက်နှစ်ဦးနှင့်ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အီးယူသံအမတ်မှ စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောဆိုထားပြီး အမေရိကန်သမ္မတဟောင်း ဘီလ် ကလင်တန်ကလည်း သတင်းထောက်နှစ်ဦးအား ချက်ချင်းလွှတ်ပေးရန် သူ၏တွစ်တာ အကောင့်တွင် တောင်းဆိုထားကြောင်း သိရသည်။
ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှု အချက်သုံးချက် သဘောတူညီမှုရရှိ
လူသတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှုများဖြင့် နှစ် ၄ဝ ကြာ လွတ်မြောက်နေခဲ့သော ဝရမ်းပြေးကို အမေရိကန် ရဲများ ဖမ??
တာချီလိတ်မြို့ရှိ မြန်မာ-ထိုင်းအမှတ်(၁)ချစ်ကြည်ရေးတံတား၌ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ထိုင်းနိုင်င??